Ukuze umuntu ngamunye lunqume ukukhethwa umsebenzi. Lesi sinqumo kuxhomeke ekutheni ngokuqinisekile ibe nempumelelo e babo bomsebenzi sithombe. Amayunivesithi of Volgograd okulungiselelwe ochwepheshe of emazingeni ahlukahlukene ukuqeqeshwa kanye neziqu. Kubalulekile kakhulu ikusasa esikoleni iziqu ngamunye, phambi okuyinto umbuzo kanjani ukuqaphela ngokwabo emsebenzini wabo ngekusasa elisekelwe ubuchwepheshe ekhona, amandla nokuzimisela ukusebenza. Omunye izikole ezingasiza nale ukukhetha iyona Volgograd State Technical University inikeza ukuqeqeshwa ezindaweni ezahlukene undergraduate okuyinhloko.
Umlando ukuvela lesikhungo
Isikhungo ngasinye asivelanga aphume ndawo, it has elide ngokuwina ukuthandwa. Volgograd Technical University nayo eziningi ngaphambi kokuba ethandwa phakathi abafundi. Yena ibe nesiqalo kusukela kwaseStalingrad ugandaganda-futhi mechanical sikhungo. Lesi sikole kwamiswa ngo-1930. Phakathi neminyaka yokuqala isikhungo sakho semfundo esenze intuthuko ekuthuthukiseni: kuqeqeshwa kwaba ezingeni eliphezulu, abaphothula sikhungo wayesebenzela izitshalo owaziwa namafektri yezwe, izisebenzi ezazidingeka emphakathini ngokwesayensi.
Phakathi nempi, uhlelo Institute iye subordinated ngokuphelele izidingo ngaphambili. Zonke imisebenzi yesayensi abangu okuhloswe ngazo okwandisa ukuzivikela wezwe. Institute ngo-1960 kwadingeka amandla ezimbili kuphela. Ngasekuqaleni kwawo-60-yalolucwaningo ezweni okungukuthi ngenkuthalo othuthukayo kazwelonke umnotho. Lokhu kwaba isizathu yokuthi kwakukhona ukushoda onjiniyela abaqeqeshiwe kulezo zimboni. Lesi sikole ngaqala ukuvula iminyango emisha, amakhono. Ngasekuqaleni '80s ke iqanjwe kabusha futhi waziwa ngokuthi Volgograd Polytechnic Institute. Esikhathini iVolga esifundeni kulesi sikhungo yayingumuzi omkhulu kunayo yonke njengomuntu onethonya elikhulu kakhulu leyo minyaka.
Ngo-1993, bephumelele ngendlela enzima yokuthuthukisa imfundo, sikhungo kwaphinde kabusha bese manje awuthwala igama Volgograd Technical University. Nge isimo esisha futhi igama wezemfundo kwakukhona kabusha semfundo. Njengoba omunye izikhungo zemfundo ehola, lokhu semfundo sekuphenduke ezingeni eliphakeme ucwaningo nentuthuko. Technical University (Volgograd) nokobana ezintsha ngenkathi abafundi ukulinganisa indlela kusukela ngo-1993 - amamojuli futhi isistimu yokulinganisa abafundi.
Izici yokwemukela imfundo ephakeme
abafundi University ungesona isakhamuzi kuphela Russian Federation, kodwa futhi kwamanye amazwe. Ukutadisha senziwa kokubili ngokungenzi-mali, futhi isivumelwano ukuhlinzekwa kwezinsizakalo ukhokhelwe emkhakheni wezemfundo. Ukuze yokwemukela Volgograd State Technical University kufanele athumele eziningi imibhalo ehhovisi wokwamukela wase-University noma igatsha. It arekhoda ezifana:
isitifiketi noma idiploma ekhombisa kokuthola abangenayo imfundo yesibili;
uma umuntu amalungelo kudingekile imibhalo eqinisekisa zabo;
4 izithombe emibhalweni.
Ukubhalisela iziqu ezifundweni, umfundi abazoba kumele abe nemfundo jikelele yesibili. Ukuze ukungena imfundo zeNkosi odlule kumele kube aphakeme, kunoma yiliphi izinga.
Uhlelo oluyisisekelo oluthi mbandela yokwemukela University of Volgograd okungukuthi i umaluju we esihlanganisiwe isimo ukuhlolwa, imiphumela zazo zibhekwa izilinganiso emnyango izivivinyo. Lokhu kubhekiswe kuzo zonke izicelo, ngaphandle izakhamuzi zakwamanye amazwe, abantu abakhubazekile, izingane ezikhubazekile abantu asebephumelele isimo isitifiketi uhlelo of jikelele imfundo yesibili akulona uhlobo ukuhlolwa onyakeni wokuqala kuze kube usuku beqeda imibhalo. Kubo, njengoba ngokufaka degree yenkosi, yakhelwe isivivinyo emnyango.
Volgograd Technical University ivumela abafundi abalindelekile ukudlula ukuhlolwa ukubuyekeza evumela ukuba singagcini nje ngokuba simazi nge inqubo ukuhlolwa, kodwa futhi ukunquma yezinga labo lokuqeqeshwa, kanye tune nasengqondweni ku ukuhlolwa ngesimo ukuhlolwa.
Yimuphi umnyango kule nyuvesi?
Technical University of Volgograd ukubunjwa yayo has 8 amandla kosuku uhlobo ukuqeqeshwa :
Faculty of Technology zokwakha;
electronics nekhompyutha yobunjiniyela;
izinhlelo ezizenzakalelayo nolwazi ngobuchwepheshe;
ezokuthutha izakhiwo kanye izikhali izinhlelo;
Volgograd Technical University, amandla enikezwe ibhalwe ngenhla, has namanje abanye timphawu tesakhiwo abafundi kusihlwa futhi ukuxhumana:
ukuqeqeshwa Faculty kanye ukuphinda uqeqesho abasebenzi zobunjiniyela.
Kirov kusihlwa ubuhlakani.
Mechanics Krasnoarmeysky futhi Metallurgy Faculty.
Ngaphezu kwalokho, isakhiwo se-yamanyuvesi ekuhambeni:
ukuqeqeshwa ongoti angaphandle;
On okuyinto amandla abafundi baqeqeshiwe?
Umsebenzi oyinhloko yomnyango - ukuqeqesha abafundi kwelinye direction noma okukhethekile. Le nyuvesi has 47 iminyango, lesiniketwe esibanjiwe neminyango efaneleyo. Kuye ezikhethiwe isiqondiso noma okukhethekile ukuqeqeshwa senzeka eziningana neminyango, okuyiwona esinqunyiwe isiyalo edingekayo ukuze inkosi yakho akhethiwe umsebenzi. Ziningi neminyango iziqu futhi baye ahlukene neminyango isakhi imfundo okuyizinto ezidingekayo ekwakhekeni jikelele abafundi. Lokhu izifundo yobuntu, okuyinto bafundiswa abasebenzi eminyangweni efanele, njengokuthi "Philosophy", "Political Science" nokunye.
abasebenzi Scientific inyuvesi
abasebenzi kakhulu afanelekayo imfundiso kuqinisekisa ukuthi ukuqeqeshwa abafundi Kwenziwa ezingeni ehloniphekile.
Ziqhenye base kwalo ngokwesayensi Volgograd. State University of lo muzi has othisha kuka 1,000. Phakathi kwabo kukhona omunye academician, 4 amalungu isimo Academy, osolwazi 140, 617 oprofesa bahlobanisa. Umsebenzi esikoleni esiphakeme ayisishiyagalolunye Usosayensi ahlonishwe of Russia - osokhemisi metallurgists, 13 abasebenzi ahlonishwe wesikole imfundo ephakeme. "Ahlonishwe Worker of Science and Technology" ukhishwa 5 abantu, "Honorary Worker Ephakeme Professional Education" ukhishwa 76 othisha.
Izinga eliphezulu lebhodi isikhungo academic umkhandlu kanye namanyuvesi abaphathi. Scientific University Council, walo yiyo Rector, kuhlanganisa e yayo ubulungu ezingaphezu kuka-70 abantu. umsebenzi waso ukuxazulula zonke izinkinga core ezihlobene ukusebenza eziyisisekelo University. Isakhiwo ekuphathweni zihlanganisa 7 amaphini rectors, abaphethe ekusebenzeni izigaba zomuntu ngamunye umsebenzi inyuvesi.
Eyesibili ezingeni lokulawula - lama- ubuhlakani imikhandlu. Ngaphansi zabo isiqondiso, sife umsebenzi zesayensi kanye methodological iseluleko izinkomba. Esesithathu ezingeni lokuphatha kuyinto emnyangweni.
izinhlelo Social kubafundi
Njengezinye amayunivesithi Volgograd, inyuvesi unaka kakhulu eyayidingida izinkinga zezenhlalakahle. I inyunyana inhlangano abafundi uyakusiza ukubhekana nezindaba alandelayo:
accrual abafundi abaswele betadisha eminyakeni yokuqala neyesibili, imifundaze owandiswayo;
ukuhlinzeka izaphulelo for zokuzithokozisa kanye nezemidlalo ekamu futhi sibhedlela;
ukuhlinzekwa ngosizo lwezimali;
Kuze kube yimanje, Volgograd Technical University ibambisane amanyuvesi kanye namabhizinisi amazwe nesikhombisa. Kuyinto amazwe njenge-Indiya, Belgium, Czech Republic, Bulgaria, Poland, United Kingdom, eVietnam, eJalimane, e-Italy, Sweden, Canada, China, Finland, USA, France, e-Ukraine, Japan. ekuhleleni ngokuBambisana neziNdaba izinkulumo kokuqhuba, izingqungquthela ucwaningo, kanye nokuqeqeshwa kanye nomsebenzi ucwaningo ngokuhlanganyela.
Ngenxa zamazwe amabili izivumelwano zokubambisana , abafundi, abafundi iziqu nothisha nethuba abathethise phesheya, iqhaza izingqungquthela international, internship kanye umkhuba, ukufinyelela izinto ezidingekayo yamaphrojekthi yabo iziqu. Ngokubambisana eJalimane ivumela ochwepheshe abasebasha ukuthola amagranti ucwaningo zabo emazweni abo.
Ingabe iziqinisekiso umsebenzi inyuvesi?
Akuwona wonke amanyuvesi Volgograd uqhubeke ngokubambisana neNhlangano abafundi yayo yangaphambili. Technical University e yayo lwesakhiwo oluqukethe sesevisi, ehlinzekwa okungukuthi uzihlanganisa ekuhlinzekeni esinqunyiwe noma esigcwele umsebenzi ukuze iziqu abafundi lwezemfundo izikhungo. izinhloso zayo zimi kanje:
ekuqinisekiseni umsebenzi abafundi undergraduate ngesikhathi khulula emakilasini futhi samaholide;
umsebenzi search ngokuhambisana okukhethekile eyunivesithi abathweswe iziqu;
ngokubambisana neNhlangano amabhizinisi kwedolobha Volgograd, ulwazi kanye nokukhangisa umsebenzi nekucasheka abaphothule;
ukuhlinzeka ithuba lokubamba iqhaza enhlanganweni imisebenzi intuthuko professional, kanye ukuphinda uqeqesho abathweswe iziqu.
Le nyuvesi uhlelo olukhethekile, ukufunda lapho ungathola okwengeziwe okukhethekile "Umbusi yokuphatha ibhizinisi". It ihlose ukuqeqesha isizukulwane esisha abaphathi yokuncintisana, usebenzisa yesimanje izindlela, amasu kanye nobuchwepheshe zokuphatha. Ngaphezu kwalokho, kukhona ukuqeqeshwa izikhungo 36 eyunivesithi, okukuvumela lunye ngaphezulu.
Ubani futhi kanjani lapho ngimiswa Potanin scholarship
Yini kudingeka kudlule ku uMklami noma imayelana ukufunda ukuba Unicode
Zokushisela insimbi engagqwali: izici inqubo
Dream ncwadi. Kungani dream mayelana izinwele zakho?